Nezvedu - Gopod Group Holding Limited
Nezvedu Profile yekambani Nhoroondo Yekambani Honorary Awards Patent Certificate Qualification Certificate Factory Equipment
Yakatangwa muna 2006, Gopod Group Holding Limited ibhizimusi rinozivikanwa nenyika repamusoro-soro rinonyanya kushanda muR&D, kugadzira uye kutengesa komputa nenharembozha.Tine mafekitori maviri muShenzhen neFoshan anofukidza nzvimbo inosvika 35,000 square metres, ine vashandi vanopfuura chiuru nemazana mashanu.Zvakare, tiri kuvaka itsva 350,000-square-metres high-tech industry park muShunde, Foshan.
Gopod ine yakakwana yekugovera nekugadzira cheni uye yepamusoro R&D timu inopfuura zana nhengo, isu tinopa yakazara zvigadzirwa zvekugadzirisa masevhisi kubva kuindasitiri dhizaini, dhizaini yekugadzira, yakabatanidzwa yedunhu dhizaini, dhizaini yesoftware kusvika mukuumbwa nekuunganidza chigadzirwa.Iyo kambani ine mabhizinesi mayuniti anosanganisira R&D, kuumba, kugadzira tambo, magetsi charger workshop, metal CNC workshop, SMT uye gungano.Uye isu takawana IS09001 :2008, ISO14000, BSCI, SA8000 uye zvimwe zvitupa, pamwe nehombe huru yematende.
Muna 2009, fekitori yeGopod Shenzhen yakawana MFi certification ndokuva mugadziri wekondirakiti yeApple.
Muna 2019, zvigadzirwa zveGopod zvakapinda mukutengesa kwepasi rose kweApple Store uye kutengesa zvakanaka muAmerica, Europe, Australia, Japan, Korea, nezvimwe. Best Buy, Fry's, Media Market uye Saturn.
Tine timu yehunyanzvi hwebasa rehunyanzvi, kugadzirwa kwepamberi nemidziyo yekuyedza, hukuru hwekugadzira uye yakanakisa mhando yekudzora sisitimu, iyo inotiita mudiwa wako wepamoyo.
2021Tinoramba tichienda mberi.
2020Kunyangwe madutu emhepo akakonzerwa nedenda reCCIDID-19 muna 2020, takawana kukura kwakasimba mugore, nekuda kwekushanda nesimba kwevashandi vedu vese.
2019Takatanga indasitiri-yekutanga 100W GaN charger chirongwa, nechaunga-mari inosvika US$2.45 miriyoni.Takaunzawo zvigadzirwa zvedu zvine chekuita ne USB-C kuApple Store uye saka takaona kusvetuka kukuru mukutengesa.Parizvino, tine mapurojekiti gumi nemaviri paApple Store.
2018Takatumira zvinopfuura mamirioni mashanu USB-C HUB zvigadzirwa, zviri pamusoro muindasitiri.Simba redu rebhizimisi rebhizimisi rakavambwa uye rakabva rawana zvibvumirano zvepasi rose nokuda kweiyo yakazotanga PowerHUB uye PowerBank HUB, inounza huwandu hwehuwandu hwematendi edu kupfuura 150. Mukuwedzera, chikwata chebhizimisi chakaburitsa indasitiri-yekutanga 130W PD PowerBank.
2017Takaona kukura kwakasimba kwebhizinesi, nekutengesa kunodarika US$100 miriyoni kekutanga.Takaendesa yakakura USB-C HUB kutumira muindasitiri.
2016Gopod yakakwidziridzwa kuti ive nhengo yeHDMI/USB-IF/QI/VESA.Iyo isati yatengeswa yaunga-mari ye USB-C extender yakasvika US $ 3.14 miriyoni, yakawanda muindasitiri.
2015Gopod yakahwina CES Yakanakisa Chigadzirwa Dhizaini Mubairo uye yayo USB-C nhevedzano yakawana iyo IF Dhizaini Mubairo.Yakasimudzirawo MFi kuenda kuV6.4.Mafekitari ayo akawana zvitupa zvakaita se ISO9000/ 14000 uye BSCI.
2014Gopod yakatanga chekutanga cheMFi-certified store chigadzirwa, nechaunga-mari inosvika US$2 miriyoni.Yakanga iri yepamusoro-inotengeswa yekuchengetedza yerudzi rwayo munyika.
2013Gopod akatanga chaiyo hardware yekugadzira unit.Yakashongedzerwa nehuwandu hukuru hwezvishandiso zvehunyanzvi, iyo unit inyanzvi mukugadzira hardware yakaita sealuminium alloy.
2012Gopod akatanga tambo yebhizinesi unit, iyo yakakosha mukugadzira tambo dzakasiyana siyana dzinosanganisira MFi-yakasimbiswa USB tambo.
2011Gopod yakahwina Chigadzirwa Dhizaini Mubairo kuCES muUS Yakatangisawo yekutanga MFi-yakasimbiswa bhatiri rinopeta.
2009Gopod akawana Apple's MFi certification ndokutanga kugadzira nekugadzira MFi-yakasimbiswa mbozha nhare.
2008Gopod yakagadziridza hurongwa hwayo kuti itarise kugadzirwa kwezvinhu zvenharembozha.
2006Gopod yakavambwa, inyanzvi muR&D, kugadzira uye kutengesa kwemakomputa peripherals.